iOS operating system ကို အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS သည် operating system ဖြစ်သည် iPhone, iPad, iPod Touch နှင့် Apple TV ကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုအသက်ဝင်စေပါသည်။ သူ့ ရိုးရှင်းခြင်းနှင့် optimization ၎င်း၏တိုင်ဖြစ်ကြသည် ဒါကြောင့်သန်းနဲ့ချီတဲ့သုံးစွဲသူတွေဟာ system ကိုချောချောမွေ့မွေ့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်တဲ့အခြားပလက်ဖောင်းတွေကိုရွေးချယ်မယ့်အစား iOS ကိုရွေးချယ်ကြတယ် နှစ်စဉ် Apple သည် iOS update အသစ်ကိုနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည် ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ထိုအချိန်တွင်ရောင်း ၀ ယ်နေသောနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များအတွက်သီးသန့်အင်္ဂါရပ်များကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။
ဤ iOS 16 အယူအဆသည် ထိန်းချုပ်စင်တာအသစ်နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ဝစ်ဂျက်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ရက် .
ကျွန်ုပ်တို့သည် WWDC22 စတင်ချိန်မှ နှစ်ပတ်သာ လိုတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ရှည်လများ စောင့်ကြိုနေခဲ့သော စနစ်သစ်များကို မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်...
Apple သည် iOS အတွက် ဆန်းသစ်သော သုံးစွဲနိုင်မှု အင်္ဂါရပ်အသစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
Apple သည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်များတွင် သုံးစွဲနိုင်မှုအပေါ် အလွန်အရေးကြီးသော ကတိကဝတ်တစ်ခု အမြဲရှိခဲ့သည်။ တကယ်တော့ နှစ်တွေ...
Apple သည် Beta အသစ်ကို လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး iOS 15.6 သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် WWDC မတိုင်မီတစ်လမပြည့်မီ iOS 15 အတွက် အပ်ဒိတ်အကြီးကြီးများကို အပြီးသတ်ပြီးသောအခါ...
တည်ငြိမ်မှုပြဿနာများကြောင့် iOS 16 အများသူငှာ စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
WWDC သည် နီးကပ်လာနေပြီဖြစ်ပြီး Tim Cook နှင့်...
အပ်ဒိတ်များ iOS 15.5၊ watchOS 8.6၊ macOS 12.4 နှင့် tvOS 15.5 တို့ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ
iOs 15.5 ၏ Beta ဗားရှင်းများနှင့်အတူ ရက်သတ္တပတ်များစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်၊ အသစ် (နှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်) ကြီးကြီးမားမားအပ်ဒိတ်...
Gurman သည် iOS 16 တွင် ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် အက်ပ်အသစ်များကို ခန့်မှန်းသည်။
Apple developer များအတွက် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်သည့် WWDC22 ပွဲမစတင်မီ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိတော့သည်။ တွင်…
iOS 16 သည် iCloud Private Relay ကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် privacy features များကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
iOS 16 သည် မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ပေါက်ကြားမှုများနှင့် ကောလဟာလများအားလုံးကို လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ နည်းပါးသည်ထက်နည်းသည်...
iOS 15.5 beta သည် "ထိခိုက်လွယ်သော" နေရာများတွင် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများ၏ အမှတ်တရများကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။
por Tony Cortes လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
Apple သည် iOS 15.5 beta တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် ချိန်ညှိမှုအသစ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည်...
iOS2Beta 15.5 ကို ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Apple သည် iOS 15.5 Beta 2, watchOS 8.6 အပါအဝင် ၎င်း၏စက်ပစ္စည်းများအားလုံးအတွက် ၎င်း၏ Betas အသစ်ကို ယခုလေးတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
iPhone နှင့် iPad ပေါ်ရှိ iOS 11 တွင် AirDrop လုပ်ဆောင်မှုကိုမည်သို့သက်ဝင်ရမည်နည်း
iPhone ပေါ်က WiFi နဲ့ပြproblemsနာရှိလား။ ဒီဖြေရှင်းချက်များကိုစမ်းကြည့်ပါ
iOS 11 နှင့် MacOS High Sierra ၏နောက်ခံပုံအသစ်များကိုရယူပါ
iOS 11 ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုမှတ်စုအက်ပ်ဖြင့်မည်သို့စကင်လုပ်ရမည်နည်း
IOS 10 download link များ
iOS 10 ဖြင့် iPhone တွင်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်လှည့်ကွက်
iOS 10 ကို iPhone 4s တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ ပြီးတော့ iPhone5မှာလား။
IOS9download link များ
iOS 8.1 ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်အတွက်လင့်ခ်များ